in kabadan 20 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Ciraaq | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA in kabadan 20 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Ciraaq
in kabadan 20 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Ciraaq
Ciraaq(SONNA) Waqooyiga Magaalada Baqdaad ee Caasimadda Dalka Ciraaq ayaa waxaa ku dhimatay Ugu yaraan 23 iyo lixdan kale oo la dhaawacay kadib markii halkaasi lagu qarxiyaya gaari ku rarnaa waxyaabaha qarxa.
Laamaha Amaanka dalka Ciraaq ayaa sheegayaa in Qaraxu uu ka dhacay suuq aad u mashquul badan kaasi oo kuyaala bartamaha magaalada Tuz Khurmatu oo qayaas ahaantii 160 KM dhanka Waqooyi kaga aadan magaalada Baqdaad.
Waxaa isbitaalada la dhigay dad aad u farabadan kuwaasi oo dhaawacyo kaladuwan uu ka soo gaarey qaraxaasi oo lala beegsaday suuq aad u mashquul badan
Majiro ilaa iyo haatan cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi,balse inta badan waxaa halkaasi weerarada bartilmaameedka ah ka fuliya koxda Daacish.
Xaydar Al-Cabaadi Raiisul Wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in uu ay dhow dahay waqtigii la soo afjari lahaa dagaalka ka dhanka ah Daacish,kadib markii deegaanadii ugu dambeeyey ay qabsadeen ciidamada Ciraaqiyiinta.
Previous articleMagaalada Baydhabo oo ka socota qaban qaababo lagu soo dhaweynaya R’iisul Wasaare Khayre
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo Hambalyo u dirtay Madaxweynaha cusub ee Somaliland